Ngeina / Khua hun | Page3| Radio Veritas Asia
Siadaw Pa lehaPawlte lasakna
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ​ကြောင့်​ကူးစက်​တဲ့​ရောဂါ ပ​ပျောက်​ရေးနှင့် ​ရောဂါ​ဝေဒနာခံစား​နေရ​သောသူများ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကျန်းမာဖို့ရန် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဆရာ​တော်ကြီး နှင့်အတူ ဆရာ​တော်​ကျောင်းဝင်းမှာ သတင်းသုံး ​နေကြတဲ့ ဘုန်း​တော်ကြီးများ၊ သီလရှင်များ နှ...
Lourdes Tonu pawi, Nitak hun bawlna, Tahan, Kalaymyo
(၄၃) ကွိမျမွောကျ ဆုတောငျးပွညျ့ လုပျ(ဈ)မယျတျော သခငျမပှဲ . A 43 veina Lourdes Tonu pawi, Nitak hun bawlna, St. Theresa's Parish, Tahan, Kalaymyo. (23.2.2020)
Siampi Inn leh Tonu Buk honpawi
Kalay Diocese sung aa om Bukphir Parish (Clergy House) Siampi inn leh Tonu Suang Hawm thupha piakna leh kong honna Pawi ah Zola sakna hi.
- Amasa in amazon rainforest pen Brazil gam lam aa om ahi hi. leitung huih diikna (tuap) aki cih mah bangin, ih nuntakna dingin leitung bup in ih diik ahi huih khempeuh pan percent 20 pen hih amazon panakingah hi ci-uh hi.